Firenena tsara tarehy tsara tarehy i Shily ary misy mponina malaza. Miezaka ny miverina eto ny mponina any amin'ny firenena CIS teo aloha mba hahita toerana tsy mahazatra sy toerana mahaliana. Mandeha mankany amin'ity firenena Amerikana Atsimo ity ny mpitsidika dia manontany avy hatrany ny fanontaniana: mila visa iray ve aho ao Shily?
Visa any Chili ho an'ny Okrainiana sy Rosiana
Tamin'ny Aprily 2015, teo amin'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny ao Okraina sy ny Masoivohon'i Chile ao Okraina, nisy fifanarahana natao hananganana governemanta tsy misy fahazoan-dàlana eo amin'ny firenena. Ankehitriny dia afaka mijanona ao Shily mandritra ny 90 andro ny Okrainiana raha tsy misy visa. Saingy raha ny antony nahatongavanao dia fitsangantsanganana fizahan-tany na vahiny.
Tsidika Okrainiana tsy dia tambo isaina, angamba, noho izany, nanapa-kevitra ny hanokatra ny masoivoho Shiliana ny firenena. Raha toa ka mangataka fahazoan-dàlana maharitra na mametraka fanontaniana amin'ny consuls ianao, dia tsy maintsy ampiharina amin'ny masoivoho, izay any Mosko. Azonao atao ny manolotra rakitra amin'ny courier.
Tamin'ny taona 2011, Rosiana dia nametraka lalàna iray mikasika ny fampitsaharana ny fitondrana visa, izay nanamora ny fitsangatsanganana tany amin'ny firenena kanto any Chile. Ankehitriny, ny Rosiana, tahaka ireo Okrainiana, mba hialana sasatra ao Shily mandritra ny telo volana, dia manangona antonta-taratasy kely fotsiny, izay ampiasaina hamoahana visa fizahan-tany lava efa ela. Mila:
Fandevenana vahiny, izay mety hitranga mandritra ny 30 andro aorian'ny fiafaran'ny diany.
Fandefasana tapakila. Izy no miantoka fa tsy hijanona mihoatra ny 90 andro ianao.
Vola: vola na banky banky. Ny harena ara-bola dia manome antoka fa ho afaka hiantoka ny fijanonanao any amin'ny firenena ianao ary tsy hamorona olana amin'ny lafiny ara-bola.
Raha manan-janaka aminao ianao, dia mila mitondra ny taratasy fanamarinana anao ianao, ary raha toa ilay mpisotro ronono - kopia voamarina amin'ny taratasy fanamarinana ny fisotroan-dronono. Raha ny tanjon'ilay dia dia ny mijanona amin'ny havana na namana, mila fanasana avy amin'ny olona manokana ianao izay hanamafy ny tanjon'ny fitsidihanao.
Io antonta-taratasy io dia ilaina, na ho an'ny Rosiana na ho an'ny Okrainiana. Bonus iray hafa ho an'ireo olom-pirenen'ireo firenena roa ireo ny fahafahana manitatra ny visa fizahan-tany raha tsy miala amin'ny firenena. Raha manana antony tsara ianao, dia mila mitsidika ny Sampan-draharahan'ny solontenan'ny vahiny ao an-tanànan'i Santiago ary hampitombo ny halavam-pijanonana ao amin'ny firenena.
Visa ho any Chili ho an'ny Belarosiana
Mifanaraka amin'ireo olom-pirenen'i Rosia sy Okraina dia mila visa ny Belarosiana hitsidika an'i Chile. Mahagaga fa i Belzika dia manondro ampahany kely amin'ny firenena izay mbola tsy nanao sonia ny fifanarahana tamin'ny firenena Afrikana Tatsimo momba ny famongorana ny fitondrana visa. Noho izany, na dia manapa-kevitra ny hijanona ao Shily mandritra ny roa andro fotsiny aza ianao na handeha ho any amin'ity firenena ity, mbola mila manangona antonta feno taratasy ho an'ny fanodinana visa ianao. Noho izany aloha, mila mamaritra ny visa ilainao indray mandeha ianao na maromaro. Amin'ny tranga voalohany, afaka miditra ao amin'ny firenena ianao raha tsy maherin'ny 30 andro maoderina, ary maro no ahafahana mampitombo io vanim-potoana io ho 90 andro.
Tsy misy ny masoivohon'i Chile ao Belarosia, noho izany dia ilaina ny mihatra amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny ao amin'ny Repoblikan'i Belarus na mamoaka visa mivantana any Chili. Izany dia avela amin'ny tranga maro. Miampita ny sisintany miaraka amin'ny antontan-taratasy ilaina ianao ary ao anatin'ny fotoana fohy indrindra azonao omena ny ambasady. Noho izany, inona ny antontan-taratasy ilaina:
Sary miloko manga fotsy 3x4 cm.
Ny tany am-piandohan'ny pasipaoro vahiny sy ny kopia, nohamarinin'ny notatera iray.
Fanaovana fangatahana fahazoan-dàlana vita amin'ny visa.
Ny taratasy fangatahana zaza teraka dia ilaina amin'ny ankizy. Ny vidin'ny visa dia manodidina ny 10 USD.
Ahoana no fisafidianana varavarankelin'ny trano?
Hyperhidrosis amin'ny palma
Tavy elektrika ho an'ny metaly
Inona no mety ho an'ny alika?
Coats 2017 - ny lamaody sy lamaody indrindra
Ipackete ho an'ny saka
Fitsaboana aloha - Fambolena sy fiahiana
Lady Gaga sy Bradley Cooper dia tratra aoriana noho ny fanorohana
Fiterahana ara-pihetseham-po amin'ny saka
Norkolut miaraka amin'ny endometriozy
Dresses Chiffon 2016
Cream of Skinoren
Salady miaraka amin'ny holatra - fomba tsotra
Nahoana no nofinofy ny ra iray hafa?